Inkonzo - iRaymin Display Products Co, Ltd.
Umxholo kunye noyilo
Kukho imizuzwana nje embalwa umthengi akunike yona. Ngokuchanekileyo banokuba ngabathengi ekujoliswe kubo ukuba ungabatsala ukuba bathathe imveliso yakho. Indawo elungileyo yokuthengisa ikhadibhodi okanye iPhepha eliPakishwayo linokukwenza oku kubaqulunqi bethu bayayiqonda indlela yokwenza kwaye bazakusebenza kunye nawe ukwenza isisombululo esifanelekileyo, ngeenjongo zokukunceda wenze amanyathelo okuthengisa aphumeleleyo anyusa imveliso yakho.
Akukho sisombululo sisemgangathweni kwinqanaba lokuthenga. Yindlela esebenza ngayo izisombululo zethu ukubonisa ukuba zahlukile njengophawu lwakho kunye neemveliso. Silandela iimfuno zakho ezithile kwaye sisebenzisana ukubeka izimvo zethu zoyilo ukuya kwiprojekthi. Siyazi nje ukuba uya kumangaliswa ziziphumo. Ke imibuzo yile, ungasifumana njani esona sisombululo sisilungele?
Ngaba uyilo olulungele ukuprinta?
Eyoyikekayo, sinokuba noyilo lwakho lube yinyani ngomsebenzi wakho wobugcisa. Iisampulu zokuhlekisa ziya kubonelelwa kuwe kwaye mhlawumbi ngezindululo zethu zobungcali.
Ngaba uyazibuza ngeziphumo zokugqibela?
Sukuba nexhala. Umyili we-3D uya kukunceda ukuba wenze isiseko se-3D ekunikezelweni kwesisu sakho okanye kumzobo njl.
Okanye awunazo kwaphela izimvo?
Ayinamsebenzi, thumela nje imveliso yakho, uxelele ubungakanani nge-FSDU nganye kufuneka ubeke iimveliso. Siza kwenza ngokwezifiso isisombululo sakho kunyeiingcebiso zethu zobungcali. Ngamava eminyaka yokudala imiboniso ye-POP kunye nokupakishwa kweentengiso, iqela lethu loyilo lolwakhiwo besele lisebenzise uyilo kumashishini ohlukeneyo. Iqela lokuyila leRaymin ngoku libonelela ngezisombululo zobungcali kuwo omabini amaShishini awaziwayo kwilizwe laseTshayina.
Ukuba noyilo loyilo alubonakalisi yodwa ayisiyiyo kuphela injongo, sikwanomdla wokwenza ukuba indleko isebenze. Ngamava okuyila zonke iintlobo ezahlukeneyo zokubonisa, iRaymin Display inikezelwe ekusebenziseni eyona ndlela yezoqoqosho yokwakha umboniso. Songa iindleko zabaxumi bethu kwaye songa okusingqongileyo ngokusebenzisa izinto ezingavuthi kakhulu kwaye sithathe indawo yezinto zeplastiki ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe.
Yiba nomfanekiso ngqondweni weZiphumo
Ngaphambi kokuqhubeka nokwenza isampulu, 1: 1 ratio ye3D enikezelwa iya kubonelelwa kumthengi ukuze abe nomfanekiso-ngqondweni womboniso. Kulula kakhulu kubaxumi baphesheya ukuba bafumane imvume ekhawulezayo yeesampulu.
Ukuhanjiswa kweSampula ngokukhawuleza
Isampula emhlophe emhlophe iyakwazi ukugqitywa kwithuba leentsuku eziyi-1-2 zokusebenza ngelixa isampulu yombala ingathatha iintsuku ezingama-2-3 zokusebenza.
Intlawulo yasimahla yesampulu
Isampulu yethu ihlala isimahla kubathengi bethu ukuba bangathanda ukubeka iodolo kuthi.
Umboniso weRaymin unefektri elawula yonke inkqubo ngaphakathi endlwini, iqinisekise imigangatho esemgangathweni kunye nokusebenza ngokukuko ukufumana imiboniso kunye nokupakisha kuwe ngokukhawuleza. Sinomatshini wethu wokushicilela nge-offset, umatshini omkhulu wokulaminetha umatshini, umatshini wokusika ngokuzenzekelayo Isiseko kwezi, siyakwazi ukulawula ngokuqinileyo iindleko kunye nokuvelisa umboniso kunye nokupakisha ngokukhawuleza kunabanye abakhuphisana nabo.
Umgangatho kunye neNkonzo yokuThengisa emva kweyona nto ibaluleke kakhulu
Sisoloko sibambelela kwi "Umgangatho kunye neNkonzo yokuThengisa emva kweyona nto ibaluleke kakhulu" kwinkolelo yeshishini. Ukulandela inkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO 9001, sakhe iqela eliqinileyo leQC, sisebenzisa ulawulo kuzo zombini iimveliso kunye nenkqubo yokusebenza.
I-1 × KBA Rapida 162 5C Cofa u-Offset, Ubungakanani bePhepha le-1220 × 1620
I-1 × KBA Rapida 145 5C Cofa u-Offset, Ubungakanani bePhepha le-1060 × 1450
2 × I-Komori Lithrone S40 5C Cinezela i-Offset, Ubungakanani bePhepha le-720 × 1020
1 × Iphepha leReel Sheeter, Ubungakanani bePhepha le-1700 (W)
1 × Iphepha umsiki, Sheet Ubungakanani 1680 × 1680
Umatshini wokuLaminetha o-1 × oZenzekelayo, ubungakanani bePhepha le-1220 × 1620
Umatshini wokuLaminetha o-1 × oZenzekelayo, ubungakanani beshidi 720 × 1020
1 × Yenyuka Umatshini wokufaka, Ubungakanani bePhepha le-1650 × 1650
2 × incence Ayanda Machine, Sheet Ubungakanani 720 × 1020
2 × Epson 7910 Umbala woBungqina boDijithali, ubungakanani bePhepha ukuya kwi-610
1 × I-Rzcrt-2516-Cut iDigital Cutter
1 × Rzcrt-1813E Umsiki wedijithali
1 × i-Ect yeBhodi yeTester
1 × Iibhokisi, Ikhadibhodi Resistance Broken Meter Machine
Umatshini wokuvavanya i-1 × ye-Ink Adhesion
Ukusika ukusika, ukusonga kunye nokuGcina
Umatshini wokuSika i-1 × oZenzekelayo, ubungakanani bePhepha le-1220 × 1620
Umatshini we-2 × oMatshini wokuSika ngokuZenzekelayo, ubungakanani beshiti 720 × 1020
Umatshini wokuSika i-3 × Semi-Auto-Cutting, Ubungakanani bePhepha le-1200 × 1620
I-1 × yeBhokisi yokuSonga ngokuzenzekelayo kunye noMatshini weGluing, Ubungakanani bePhepha le-1100 × 1100
Ibhokisi yoku-1 eyi-Auto yokusonga kunye ne-Gluing Machine, Ubungakanani bePhepha le-780 × 780
Ukugcina iindleko zokupakisha, abanye abathengi bakhetha ukupakisha iimveliso zabo ngokuchanekileyo ngokuBoniswa kweKhadibhodi. Oku kuhlala kusenzeka ukuba kukho iintlobo ezininzi zeemveliso eziza kuxubeka kwi-FSDU.
Iinkonzo zethu zeNdibano kubandakanya:
· Ukugcinwa kwemiboniso kunye neempahla
· Ukuzaliswa kwemiboniso nganye yeempahla
· Ukubekwa kwiipelethi ezincinci
· Ukulayisha nokupakisha kwiipelethi eziqhelekileyo
· Uvavanyo lwezothutho
· Ukugcinwa kweepelethi esele zilungile
· Ukuhambisa ngenqanawe
Ipakethi ethe tyaba
Abanye abathengi bafuna ukupakisha ipakethi 1 okanye iiseti ezininzi zemiboniso kwibhokisi enye ephethe iphepha lokuyalela.
Umzi-mveliso wethu ukhululwe eFoshan, ibekwe kufutshane nezibuko laseShenzhen. Kulunge kakhulu kuthi ukuba sibeke ngaphandle izibuko zePOS zonke. Sinikezela ngolwandle ukuthunyelwa, ukuthunyelwa komoya kunye nokuhanjiswa okuvakalayo, ngokweemfuno zakho.